Madaxwaynaha SEBABWE Da,dii Ayaa Kusoo Baxday | Saxil News Network
Madaxwaynaha SEBABWE Da,dii Ayaa Kusoo Baxday
M/weynaha 90 sanno jirka ah ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa ku kufay roogii uu ku socday Arbacadii shalay xilli uu ka degayay garoonka diyaaradaha magaalada Harare ee caasimada dalkiisa.
Wariye u shaqeeya wakaaladda wararka AFP ayaa la helay sawiro muujinaya m/weyne Mugabe oo inta tilaabo qaado haddana dhacaya garbahana ay ka qabanayaan xubno dawlada ka tirsan.
M/weyne Robert Mugabe ayaa xilliga uu kufayay waxaa uu ka laabtay magaalada Addis-Ababa ee xarunta dalka Ethiopia halkaasoo uu kaga qeyb galay shirkii madaxda Midawga Africa oo asaga shir gudoon loogu doortay.
M/weynahaan oo sidoo kale noqday hogaamiyaha madaxda xilligaan ee Africa kan ugu da’da weyn ayaa kufay waxyar kadib markii uu dhamaystay hadal uu warbaahinta siiyay oo uu kaga hadlayay safarkiisii Addis-Ababa.
Wakaaladda wararka AFP ayaa ku waramaysa in markii uu dhacay ama uu kufay M/weynuhu inay markiiba caawiyeen oo ay garbo qabteen xubno ka tirsan illaaladiisa iyo madaxdii kale ee goobta ku sugnaa ayagoo horey ka saaray gaarigiisa oo goobta yaala.
Robert Mugabe oo dabayaaqada bishaan noqonaya 91 sanno jir ayaa talada wadanka Zimbabwe qabsaday 22 bishii December sanadkii 1987,kii.